Amanqaku kaMichael Reynolds Martech Zone |
Amanqaku ngu UMichael Reynolds
UMichael nguMongameli kunye ne-CEO yeSpinWeb, iarhente yedijithali ehambisa Uyilo lwewebhu elidibeneyo izisombululo kunye ukuthengiswa kwedatha. UMichael uQinisekisiwe kwiNtengiso kwaye ingena kwilizwe lonke kwimisitho yoshishino.
Kutheni iiRPs zeWebhusayithi zingasebenzi
NgoLwesibini, Meyi 14, 2013 NgoLwesithathu, Meyi 15, 2013 UMichael Reynolds
Njenge-arhente yedijithali kwishishini ukusukela nge1996, sinethuba lokwenza amakhulu eewebhusayithi ezinamashishini kunye nezingenzi nzuzo. Sifunde okuninzi apha endleleni kwaye siyifumene inkqubo yethu ukuya kumatshini oyile kakuhle. Inkqubo yethu iqala ngeplani yewebhusayithi, esivumela ukuba senze umsebenzi wokuqala wokulungiselela kunye neenkcukacha zokuxhamla abathengi ngaphambi kokuba siye kude kakhulu kwindlela yokucaphula nokuyila. Ngaphandle kwento yokuba
Seta iiProfayile zakho simahla: Susa ikhonkco kwiakhawunti yakho ye-Twitter
NgeCawa, ngoJulayi 1, 2012 NgeCawa, ngoJulayi 1, 2012 UMichael Reynolds
Ndiza kuvuma… isibhengezo samva nje sokwahlukana phakathi kwe-Twitter kunye ne-LinkedIn siyifudumezile intliziyo yam. Abantu abasayi kuphinda babenakho nje ukungaphefumli ngokuhlaziya ii-Twitter zabo kwi-LinkedIn ngaphandle kokungena kunye nokuzibandakanya. Ngelixa ndisazi ukuba abanye babelana ngam glee, zeziphi izinto ezilungileyo nezingalunganga zokunxibelelanisa iakhawunti yakho ye-Twitter nezinye iinethiwekhi? Kuba i-Facebook isavumela lo mkhuba, isenzeka. Ngelixa indiqhubayo ngamandongomane, ndiya kuvuma
Iindlela ezi-5 zeefowuni zeshishini ezonakalisa uphawu lwakho
NgoMvulo, Februwari 21, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 UMichael Reynolds
Ukuqhuba ishishini elincinci kunzima kwaye kuxinzelelo. Uhlala unxibe iminqwazi emininzi, ucima imililo, kwaye uzama ukwenza zonke iidola zolule kangangoko kunokwenzeka. Ujolise kwiwebhusayithi yakho, imali yakho, abasebenzi bakho, abathengi bakho, kunye negama lakho kwaye unethemba lokuba unokwenza izigqibo ezilungileyo ngalo lonke ixesha. Ngelishwa, ngazo zonke izikhokelo abanini bamashishini abancinci batsaliwe, kunokuba nzima ukubeka ixesha kunye nengqwalaselo eyaneleyo kuphawu. Nangona kunjalo,
NgoMvulo, Februwari 14, 2011 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 UMichael Reynolds
Njengoko usazi, ukubhloga ngumsebenzi omkhulu wokuthengisa kwaye kungakhokelela ekuphuculweni kweinjini yokukhangela, ukuthembeka okunamandla kunye nokubakho okungcono kwimithombo yeendaba. Nangona kunjalo, enye yezona zinto zinzima kakhulu kubloga kunokufumana izimvo. Izimvo zebhlog zinokuvela kwimithombo emininzi, kubandakanya unxibelelwano lwabathengi, imicimbi yangoku, kunye neendaba zeshishini. Nangona kunjalo, enye indlela elungileyo yokufumana izimvo zeblogi kukusebenzisa nje inqaku leziphumo ezitsha zeGoogle. Indlela eya